Dematting Deshedding ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | တရုတ် Dematting Deshedding စက်ရုံ
Dual Head ခွေး Deshedding Tool ကို
ပိုကောင်းသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများအတွက်သေလွန်သောသူတို့သည် (သို့) ချည်ထားသော undercoat hairs, knots နှင့် tangles တို့ကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ခေါင်းနှစ်လုံးခွေးသည်အညီအမျှဖြန့်ထားသောသွားနှင့်တူသည်။
3. ခွေးခေါင်း၏ခွေးနှစ်ကောင်ကိုဖြုတ်ပစ်သည့်ကိရိယာသည်ဆန့်ထားသောနူးညံ့သောလက်ကိုင်ကိုင်တွယ်မှုနှင့်အတူ ergonomics ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်နှင့်လုံးဝကိုက်ညီမှုရှိသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးများအတွက်လက်သို့မဟုတ်လက်ကောက်ဝတ် strain ။
ခွေးများအတွက် DeShedding Tool ကို
၁.Deshedding tool သံမဏိအစွန်းရှိခွေးများအတွက်ဆံပင်ချွတ်ယွင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အလွယ်တကူဖယ်ရှားရန် topcoat မှတဆင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောသားမွေးများကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီးအရေပြားသွေးလည်ပတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
၂။ ခွေးများအတွက်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းသည်ကွေးနေသောသံမဏိဓါးတစ်ချောင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ခွေးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်ကြောင်များနှင့်ခွေးများနှင့်ဆံပင်တိုသို့မဟုတ်ရှည်သောအခြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သင့်လျော်သောတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်လိုင်းနှင့်အညီအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ခွေးများကိုဆံပင် ၉၅% ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ဖြီးစင်ရန်သင့်အချိန်ကိုသက်သာစေသည်။
Blade Brush ကိုခွေးသွန်းခြင်း
1. ငါတို့ခွေးသုတ်ထားသောဓါးသွားသည် ၁၄ လက်မရှည်သောထွန်ခြစ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုမြန်ဆန်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန်လက်ကိုင်များဖြင့်ချိန်ညှိ။ သော့ခတ်ထားသည်။
၂။ ဒီခွေးကဓါးသွားထိုးတာကိုလျှော့ချဖို့အတွက်တောင့်တင်းတဲ့ဆံပင်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့လျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုအိမ်တွင်ထားနိုင်သည်
(၄) ခွေးဖြင့်သုတ်ထားသောခွေးသည်တစ်ပတ်လျှင် ၁၅ မိနစ်ခန့်တည်းခိုခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့်သုတ်ခြင်းကို ၉၀% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
ခွေးနှင့်ကြောင် deshedding Tool ကို Brush ကို
Dog and Cat Deshedding Tool Brush သည်သင်၏အိမ်မွေးအင်္ကျီကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းအမြန်ဆုံး၊ လွယ်ကူပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
ဤခွေးနှင့်ကြောင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းကိရိယာကို Brush ကိုခွေးကြီးများဖြစ်စေ၊ ကြီးမားသည်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Dog and Cat Deshedding Tool Brush သည်သွန်းလောင်းခြင်းကို ၉၀% အထိလျှော့ချပေးပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်အပြင်ရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးသောဆံပင်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် undercoat Rake Dematting Tool ကို
ဆံပင်ကျဲစေခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေကိုညင်သာစွာနှိပ်နယ်နိုင်ပြီးဖျာနှင့် undercoat ကိုဘေးကင်းစွာဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် undercoat rake dematting tool သည်ဆံပင်အပိုများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း၊ အရေပြားသေသွားခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များမှချောမွတ်ခြင်းတို့သည်ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်မှုသက်သာစေရန်နှင့်ကျန်းမာသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များအတွက်နှာချေခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။
ခွေးများအတွက် Dematting Brush
၁။ ခွေးများအတွက်ဤဖြိုခွဲပေးသည့်ဖြီး၏ရှည်လျားသောဓါးများကခေါင်းမာသောဖျာများ၊ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်အညစ်အကြေးများကိုထိစရာမရှိဘဲထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အပေါ်ယံအင်္ကျီသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေပြီးချွေတာမှုကို ၉၀% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။